Fika 5 an'ny iOS 9 tsy navoakan'ny Apple | Vaovao IPhone
Tao anatin'ny herinandro talohan'ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny iOS 9, ny tsaho rehetra dia nahatonga anay hieritreritra fa ny rafitra fiasan'ny finday manaraka an'i Apple dia tsy hanana vaovao miavaka, saingy diso izahay. Araka ny nolazaiko imbetsaka, iOS 9 dia manana antsipiriany kely maro izay hanatsara ny traikefa amin'ny fampiasana ny iPhone, iPod Touch na iPad. Ohatra, ary na dia toa adala aza ny bokotra "miverena any ...", zavatra izay manandrana anao dia tsy ho afaka intsony ny mampiasa azy.
Misy ihany koa zava-baovao maro hafa izay tsy dia hita loatra amin'ny bokotra "miverina amin'ny ..." ary mety tsy ho voamariky ny antony mahatonga antsika tsy hahita fiasa lehibe toy ny fahaizana manitsy sary amin'ny Mail na ny Virtual Trackpad, fiasa iray nanjavona ao amin'ny iOS 9 beta fahatelo (ampahibemaso voalohany) fa hiverina amin'ny kinova ho avy. Eto izahay dia manome tsipiriany Torohevitra 5 azo alaina ao amin'ny iOS 9 izay tsy azonao adino.
1 Tehirizo amin'ny PDF ny tranokala
2 Amboary ny sary avy amin'ny iOS Mail
3 Misafidiana sary marobe nefa aza asondronao ny rantsan-tananao
4 Misafidiana lahatsoratra amin'ny Trackpad virtoaly
5 Mampiasà kaody fiarovana 6-digit
Tehirizo amin'ny PDF ny tranokala
Izy io dia zavatra efa hita tao amin'ny OS X efa ela ary azontsika ampiasaina amin'ny iOS 9. Mora be ny mampiasa azy. Ho an'ity ihany dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra fizarana (
) ary safidio ny "Save PDF to iBooks". Araky ny anarany dia hamindra ny PDF amin'ny iBooks izy io. Manoro hevitra anao aho, raha azo atao, apetraho amin'ny maody ny pejy lector mba hamafana ny sary rehetra sy ny lahatsoratra tsy ilaina.
Amboary ny sary avy amin'ny iOS Mail
Markup dia iray amin'ireo fiasa vaovao tiako indrindra ao amin'ny iOS 9 na dia marina aza izany fa tiako ho azo alaina ho an'ny tonian-dahatsary zanatany ihany koa io. Amin'ny Markup dia azontsika atao ny manitsy ireo sary izay alefa amintsika amin'ny alàlan'ny mailaka, izay azo ampiasaina hanondroana zavatra eny ifotony ho an'izay nandefa azy ireo (mazava ho azy amin'ny famerenana ny mailaka) na fanovana ireo sary izay halefanay.
Raha hampiasa azy io dia mila fotsiny tsindrio ny iray segondra ny sary izay tianay hanovana sy hisafidy «Markup». Azontsika atao ny manampy sonia, manao sary, effets fitaratra manalehibe na manampy lahatsoratra. Tsy Photoshop io, fa tena tsara.
Misafidiana sary marobe nefa aza asondronao ny rantsan-tananao
Ny zava-baovao amin'ireo izay raha tsy mikorontana be na milaza amintsika izy ireo dia tsy ho haintsika mihitsy izany. Avy amin'ny iOS 9, afaka misafidy sary maromaro amin'ny roul isika nefa tsy mila manandratra ny rantsantanana. Tsy zavatra hanavotra ny aintsika izany fa mahazo aina kokoa. Noho izany dia tsy maintsy ataontsika kitiho aloha ny «Safidio» (ambony ankavanana), avy eo tazomy ny segondra iray amin'ny sary dia solafaka ny rantsan-tànanao. Azafady mba mariho fa ny sary dia tsy azo fidina amin'ny lafiny roa. Raha misosa mitsangana isika dia hisafidy ny sary rehetra eo anelanelan'ny teboka roa.
Misafidiana lahatsoratra amin'ny Trackpad virtoaly
Na dia notapahina tamin'ny beta farany aza izy io dia hiverina amin'ny ho avy. Amin'ny alàlan'ny fanindriana amin'ny rantsantanana roa amin'ny kitendry iOS 9, araka ny hitanao amin'ny GIF, afaka mifantina lahatsoratra amin'ny Trackpad virtoaly isika. Na dia nieritreritra aza izahay tamin'ny voalohany fa tsy maintsy tohanana ny rantsan-tànana roa, ny rantsan-tànana roa dia tsy maintsy tohanana mandra-pahalasan'ny fanalahidy. Raha vantany vao banga ireo litera, afaka manandratra ny rantsan-tànantsika iray isika ary mifehy ilay kursor amin'ny iray hafa. Manantena aho fa ny Apple dia manapa-kevitra ny hanome lanja bebe kokoa an'ity Trackpad ity.
Mampiasà kaody fiarovana 6-digit
Raha toa tsy azo antoka aminao ny isa 4 dia mamela antsika hampiasa kaody 6 isa i Apple izao, zavatra eo anelanelan'ny PIN sy ny kaody alphanumeric. Raha te hampihetsika azy dia mila mankany fotsiny isika Fikirana / ID Touch ary kaody / Kaody fanovana. Rehefa miditra ny kaody voalohany isika dia eo ambany no ahitantsika ny lahatsoratra "Safidy kaody", izay toerana tokony hikasihantsika mba hisehoan'ny safidy rehetra, ireo isa 6 tafiditra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Fika 5 an'ny iOS 9 tsy navoakan'ny Apple manontolo
Nay dia hoy izy:
Satria tsy afaka manavao ny iPhone 4s aho
Valiny tamin'i Nay
Israel Calleja Gomez dia hoy izy:
Ampidiro ny beta ho an'ny daholobe na mijanona amin'ny iOS 8.4, inona no ataoko, afaka manampy ahy ve ianao?
Valiny tamin'i Israel Calleja Gómez
Gustavo Adolfo Lerea dia hoy izy:
Mijanona miaraka amin'ny 8.4. Manana 9 beta 3 aho, manana bibikely marobe izy io, misy ny rindranasa sasany tsy mandeha ary izay atolotray anao dia tsy misy ifandraisany.
Valiny tamin'i Gustavo Adolfo Lerea
Victor Alfonso Toledo dia hoy izy:
Nametraka ny beta ampahibemaso tamin'ny 6+ aho ary indraindray nihemotra, indrindra amin'ny multitasking, amin'izao fotoana izao dia manantena GM isika.
Valiny tamin'i Victor Alfonso Toledo
Manana iPhone 6 miaraka amin'ny iOS 9 beta 3 aho izay tsy mandeha ny trackpad fa amin'ny iPad Air 1 miaraka amin'ny iOS 9 beta 3 dia mandeha tsara ...
Ny olan'ny bateria dia milay amin'ny fitaovana roa !!! Andro mihoatra ny iray amin'ny tranga misy ny iPhone 6 (6 volana eo amin'ny fiainana) ary roa na telo andro miaraka amin'ny iPad Air 1 (herintaona sy 5 volana fiainana).
Ana Elena García Marcué dia hoy izy:
Mbola tsy nanavao ny IOS 8.4 aho noho ny jailbreak. Ny fanontaniako dia ny hoe tokony hanavao ny hahazoana 8.4.1 sy 9.0 ve aho, sa tokony hiandry mandra-pahatongan'ny fampandrenesana hanavao ny 8.4.1 sy 9.0. Manana iPhone 5. Misaotra
Valiny tamin'i Ana Elena García Marcué
Zara raha nametraka ny iOS 8.4 aho ary namoaka ny iOS 9 beta, amin'izao fotoana izao dia mifikitra amin'ilay 8.4 aho ka mankafy ny jailbreak
Diego Borzatta dia hoy izy:
Tsy afaka manavao ny iOS 9. 15 andro lasa izay aho no nametraka ny fanavaozana farany, ny profil malemy beta ary mifandray toy ny hoe tany Etazonia aho, ary tsy nisy. Misy olona afaka manampy ahy ve? Manana 6 plus an'ny 64. Misaotra
Valiny tamin'i Diego Borzatta
albertocarlier dia hoy izy:
Mihevitra ny misafidy sary maro aho nefa tsy manandratra mialoha ny rantsan-tànako. Google Photos no nampiditra azy ary mahavariana. Fotoana feno habibiana izao hizarana na hamafana sary marobe nefa tsy mila mandalo tsirairay, izay nandreraka indrindra. Fahombiazana lehibe indramina amin'ny google.
Mamaly amin'ny albertocarlier
VIk dia hoy izy:
Tena vaovao ve ireo? Andraso Android ho tafaverina aho!
Valiny amin'i VIk
Ahoana no hiverenako amin'ny iOS 8.4 amin'ny fanarenana ny backup avy amin'ny ios9 manampy ahy?
Mamaly an'i albert
Salama albert. Tsy afaka izany.
Namela ny fanontaniana i Pablo fa rehefa mivoaka "ofisialy" ny ios9 dia hanana beta aho, sa havaozina amin'ny tsimbadika farany .. rahoviana no mivoaka ireo betaha samihafa?
Salama albert. Raha apetrakao izy ireo, ny farany dia ny Golden Master (GM) raha ny an'ny developer. Tsy maintsy manao mitovy amin'ny an'ny besinimaro izy ireo, ny beta farany dia mitovy amin'ny an'ny ofisialy voalohany. Raha tsy te-hametraka betas bebe kokoa ianao ary manana ny an'ny besinimaro, dia tsy maintsy mamafa ny mombamomba izay napetraka ianao rehefa nisoratra anarana tao amin'ny tranokala Apple.
apetraka ho azy ve izy ireo? Ahoana no ahafantarako izay ananako? Misaotra anao
Fanontaniana iray i Pablo, rehefa apetrakao ao amin'ny iPhone 9 ny iOS 3 beta 6, rehefa vita ny kopia, dia hamerina ilay iray avy amin'ny iOS 8.4 ?? (mbola tsy nataoko tamin'ny iPhone ...)
Etsy ankilany, amin'ny iPad Air dia manana roa aho, ny iray avy amin'ny iOS 8.4 ary ny iray avy amin'ny iOS 9.
Rio dia hoy izy:
Tamin'ny andro taloha, amin'ny iPad 2 vao navotsotra miaraka amin'ny iOS 5, ny sary dia azo nofidiana tamin'ny alàlan'ny famindrana sary, na aiza na aiza lalana, ary tsy mila mitazona sary mandritra ny 1 segondra ianao. Tampoka teo. Rehefa novaina tao amin'ny iOS 6 izy ireo dia nesorin'izy ireo ity endri-javatra ity ary tsy azoko mihitsy ny antony (tena nilaina izy io). Faly aho fa naverin'izy ireo izany, fa ny tsy azoko dia ny tsy fisian'ny olona miresaka an'io endri-javatra io. Manodidina io fotoana io dia nanomboka namaky aho fa tsy soritry ny "toupee" ...
Mamaly an'i Rio
Ahoana no hamafana ny tantara miseho ankavanan'ny muni lehibe
Mamaly an'i Angelous